Faah faahin laga helayo dab aad u xoogan oo ka kacay suuq Boocle (DHAGEYSO+SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin laga helayo dab aad u xoogan oo ka kacay suuq Boocle (DHAGEYSO+SAWIRO)
Waxaa faah faahin dheeraad ah laga helayaa dab aad u xoogan oo habeenkii xalay ka kacay suuq Boocle oo ku yaala degmada Dharkeenley ee magaalada Muqdisho, kaas oo la sheegayo inuu baa’biyay hanti badan.
Inkastoo aan la ogeyn waxa dhaliyay dabkaasi ayaa hadane warar hordhac ah aynu heleyno waxay sheegayaan in dabkaasi uu ka dhashay koronto, kadibna uu kusii fiday meelo badan.
Guddoomiyaha degmada Dharkeenley C/fataax Nuur Cali oo la hadlay warbaahinta Bulshoweyn xarunteeda magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dabkaas uu markiisi hore ka dhashay koronto islamarkaana uu markii dambe kusii fiday goobo ganacsi ah oo suuqaasi ku yaala.
“Sida aynu warar hordhac ah ku heleyno dabka wuxuu ka dhashay koronto, wuxuuna baabi’iyay goobo ganacsi ah oo ka sameysan cooshado iyo laamiyeeri, marka wuxuuna dabka kusii fiday illaa 300 mitir oo isku wareeg ah, mana jiraan wax qasaare nafeed oo uu dabka geystay” Sidaasi waxaa yiri guddoomiyaha degmada Dharkeenley C/fitaax Nuur Cali.
Dhinaca kale, guddoomiyaha ayaa sheegay in daminta dabkaasi ay ka qeyb qaateen dadka deegaanka iyo sidoo kale gaadiidka dab-damiska ee maamulka gobolka Banaadir iyo kuwa shirkadda Hormuud, waxaana saakay waabarigii lagu guuleystay in la damiyo dabkaas.
Si kastaba ha ahaatee, dabka Suuq Boocle ka kacay ayaa kusoo beegmaya xilli gelinkii dambe ee shalay dab kale oo aad u xoogan uu ka kacay suuqa weyn ee Bakaaraha ee magaalada Muqdisho, wuxuuna dabkaas sidoo kale baabi’iyay goobo ganacsi oo suuqaas ku yaala.